Magaca Dowladda Qadar Waxaa Bixiyey Hogaamiyihii Khawaarijita iyo Dood Ka Dhalatay | Xaqiiqonews
Magaca Dowladda Qadar Waxaa Bixiyey Hogaamiyihii Khawaarijita iyo Dood Ka Dhalatay
Muftiga ku caan baxay muxaadaraadkiisa dooda badan dhaliyey ee lagu magacaabo Cali jomca ayaa baahiyeyarin dood badan dhalisay oo ku saabsan in magaca dowladda qadar uu baxay iyadoo la Nisbeynaayo hogaamiyihii khawaarijita ninka lagu magacaabo قطرِي بن الفجاءة” .
Cali jomca ayaa warkani ku baahiyey Qoraal uu soo dhigay boggiisa facebook balse arinta sida aadka dadka kaga sii fajicisay ayaa waxa aheyd markii uu yiri ninkii la dagaalamay Khawaarijta ee lagu magacaabi jiray لمهلب بن صفرة waxa uu ka soo jeeday Imaaraatka.
Waxaa arintani Daba dhigtay oo Dooda badan ka diyaariyey TV-ga Aljaziira waxaana dadkii lagu martiqaaday iyo taariikhyahanadii ay isku raaceen in aysan waxba ka jirin dooda Cali jomca.
Cali Jomca ayaa sidoo kale dhawaan baahiyey in diinta islaamka ay baneysay Waxa loo yaqaan “Cilmiga burjiga” oo ah Cilmi sheegaya in qofka ku dhasha xaalad uu qaadanayo astaamo gaar ah sida qofka dhasha Xiliga guga in uu noqonaayo qof barwaaqeysan Waxaa uuna cali jomca uu yiri nabiga nafttisa ayaa Burjigiisa waxaa U ahaa Guga.
Cali jomca ayaa caan ku ah taageeradiisa Afganbigii Mursi iyo sidoo kale waxa uu aad u taageera Imaaraatka iyo Sacuudiga Khilaafka Qadar iyo Khaliijka.